HIM | Health in Myanmar » 2010 » August
Community feedback mechanism for the Three Diseases Fund
Feel free to use this mechanism …
HIV/AIDS ရောဂါပိုး ကူးစက်ခံ ကလေးများအတွက် ကချင်ပြည်နယ်ရှိ မျှော်လင့်ခြင်းအသစ် မိသားစုဂေဟာ
မျှော်လင့်ခြင်း မိသားစုဂေဟာမှ HIV/AIDS ရောဂါပိုး ကူးစက်ခံ PLHIV ကလေးများ အတွက် အများကောင်းမှုဖြင့် အခမဲ့စောင့်ရှောက် ဆောင်ရွက်နေကြောင်း သိရသည်။
I hope this posting is not blocked as it has the ess ee ex word in it
It is refreshing to see an article that focuses on the economic forces at play in the sex industry instead of focusing on the victimisation, vulnerability, or agency of sex workers. The military and military security havealong history of owning and operating sex work venues in Myanmar.
ကျန်းမာရေး အသိပညာ ပေးရာတွင် သတိပြုသင့်သော အချက်များ (Risk Communication)
ကြောက်သင့်တာက အေအိုင်ဒီအက်(စ်) ရောဂါပိုး ကိုယ့်ထံကို ၀င်ရောက်လာနိုင်မယ့် အပြုအမူတွေ။ မကြောက်သင့်တာက အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီပိုးနဲ့ နေထိုင်ကြတဲ့သူတွေ၊ အေအိုင်ဒီအက်(စ်) ဝေဒနာရှင်တွေ။ သူတို့က ကိုယ့်ကို အန္တရာယ် ပေးနိုင်တာမှ မဟုတ်တာ။ ကိုယ့်အပြုအမူ တွေကသာ ကိုယ့်ကို အန္တရာယ် ပေးနိုင်တာ။
HIV/AIDS ခွဲခြားဆက်ဆံမှုများ မြှင့်တက်လာနေ
ဘော့စ၀ါနာနိုင်ငံသည် အာဖရိကတိုက်တွင် တည်ရှိသည်။ လူဦးရေ နှစ်သန်းခန့်သာရှိသော်လည်း၊ လူ ၆ ယောက်လျှင် တယောက် HIV ပိုး တွေ့ရှိထားသည်။
Bad news for people with hepatitis C who are taking antiretrovirals
Treatment with antiretroviral medications is not as effective in people with hepatitis C.
မြန်မာရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများနှင့် ကွန်ဒုံး (Migrants & Condom)
ကွန်ဒုံးတစ်ခုကို တခါသာသုံး ရပါတယ်။ အသုံးမပြုခင်မှာ သေခြာစစ်ဆေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အသုံးမပြုခင် မိမိသုံးသည့် ကွန်ဒုံးသည် သက်တမ်း လွန်၊ မလွန် သေခြာစစ်ဆေး ရပါမယ်။ ကွန်ဒုံးအိတ်ပေါ်တွင် ရေးထားသည့် သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်ကို ကြည့်၍ သက်တမ်း လွန်၊ မလွန် သိနိုင်ပါတယ်။
HIV ရှိရင် ကြွက်နို့ ပေါက်တယ်လို့ ဖတ်ရတယ်
HIV လက္ခဏာတွေ ကြည့်လိုက်တော့ HIV ရှိရင် ကြွက်နို့ ပေါက်တယ်လို့ ဖတ်ရတယ်။ ကျွန်တော့မှာလဲ ကြွက်နို့ ပေါက်နေတယ်။
New broadband! The moderator wonders what censorship, blocking, and security measures will be applied.
“HIV ကဏ္ဍ” အမေးအဖြေ
ထိုးဆေးက သူများထိုပေးမှ အဆင်ပြေနိုင်တဲ့အတွက် ထိုးပေးတဲ့ သူတစ်ယောက် လိုတယ်။ အခုလက်ရှိ ပေးနေတဲ့ ART ဆေးက တစ်နေ့ကို နှစ်ခွက် သောက်ရတယ်။ အဲဒီနှစ်ခွက် သောက်ရတာတောင် အလုပ်ကိစ္စနဲ့ ဘာနဲ့ မေ့သွားနိုင်လို့ တစ်ခွက်တည်း သောက်ရုံနဲ့ ကိစ္စပြီးမယ့်ဟာမျိုး ဝိုင်းပြီး စဉ်းစားနေတယ်။
Xinhua reports on close associates
“Close associates” makes it sound as if intimate sexual partners are actually junior business partners.